Obama oo sheegay inuusan waxna kala socon Sunta Badda Soomaaliya lagu shubo – Video - shumis.net
→ Obama oo sheegay inuusan waxna kala socon Sunta Badda Soomaaliya lagu shubo – Video
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo shalay magaalada London kulan kula yeeshay dhalinyarada ayaa su´aalo laga weydiiyey ayaa waxaa kamid ahayd waxa uu kala socdo ama ka qaban karo sunta la sheego in lagu shubay badaha Soomaaliya.
Obama oo uu su´aasha weydiiyey wiil Soomaali ah oo kamid ahaa dhalinyaradii kulankaasi ka qeyb galay, ayaa la weydiiyey waxa uu ka qaban karo dhibaatada Sunta bada Soomaaliya lagu shubo oo la tuhunsan in ay ka dhasheen cudurada kala duwan ee lagu arkay magaalooyin xeebaha saaran ee dalka Soomaaliya, xili xeebaha Soomaaliya ay ku sugan yihiin maraakiib badan ee NATO oo sheega inay la dagaalamayaan Burcad badeeda.
`…Lixda bilood ee xafiiska kaaga haray maxaa ka qaban kartaa arrintan, mase u raadin kartaa in arrintan Beesha Caalamka ay wax ka tiraahdo…` ayuu weydiiyey wiilkaasi Soomaaliga ah oo fursadaasi uga faa´iideystay inuu wax ka weydiiyo hogaamiyaha reer Galbeedka arrintan oo aan si weyn loo baarin.
Barack Obama ayaa sheegay in dalka Soomaaliya la socdo dhibaatooyinka ka jira sida amni xumada iyo burcad badeeda. Wuxuuna sheegay in dalkiisa iyo Beesha Caalamka dadaal ugu jiraan in wadanka Soomaaliya helo dowlad dibna loo soo celiyo nabada Muqdisho, balse wuxuu qiray uusan waxna kala socon arrinta la weydiiyey ee Sunta lagu shubo bada Soomaaliya.
Obama ayaa sheegay inaysan ceeb ahayn in hogaamiye qiro inuusan arrin waxna kala socon, isagoo sheegay inuu doonayo in qodobkan la weydiiyey uu baaro si uu wax oga ogaado.
Arrintan ayaa muujineysa sida ay Dowlada Soomaaliya uga gaabisay in arrimaha bada Soomaaliya ay kala kaashato dalalka awooda caalamka kuleh sida Maraykanka oo ka taageera dhanka amniga iyo dhaqaalaha, waxaana muuqata in wiilkan Soomaaliyeed uu hordhigay Obama qodob muhiim ah oo ay horey uga gaabiyeen inay ka hadlaan madaxda dowlada oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha oo shaqsiyan horey kulamo ulla yeeshay Barack Obama.